‘मलाई गाली गर्नेले दसैं र तिहारमा टीका लगाउँछन्’ – YesKathmandu.com
हिजो जुन पार्टीको टयाग मलाई लागेको थियो, त्यस पार्टीप्रति सधैंभरि सद्भाव रहनेछ । माओवादीले उठाएको जातीय मुद्दा लगायतका एजेन्डाप्रति म ज्यादै आकर्षित थिएँ । जसले मन्दिर बनायो, मूर्तिको प्रतिष्ठापनपछि उसैलाई त्यसमा प्रवेश दिइँदैनथ्यो । म पनि यो कुराको विरोधी थिएँ । तर माओवादीले त्यो एजेन्डा बिर्सेर जातीय द्वन्द्व चर्कायो ।
एक वर्षअघि नै मैले नेपालले संघीयता धान्नै सक्दैन भनेर लेख्दा कसैले पनि यो माओवादीविरुद्ध रहिछ भन्नै सकेनन् । त्यो प्रोब्लम मेरो हैन । जसले आज त्यस्तो विश्लेषण गरिरहेका छन, तिनको हो । मैले त्यति बेलै पनि आफू माओवादी हैन, त्यसको शुभचिन्तक हो भनेकी थिएँ । राम्रो काम गरेको खण्डमा म आज पनि भोलि पनि माओवादीमा हुन सक्छु । वैचारिक हिसाबले आत्मादेखि राप्रपामा गएकी हुँ । जान जरुरी पनि थियो । देश विखण्डन भएको आज मलाई आलोचना गर्नेहरूले पनि हेर्न सक्दैनन् । र, मलाई गाली गर्नेले पनि दसैंमा टीका र तिहारमा भाइटीका लगाउँछन् । तिनैले धर्मको कुरा उठाएर जनतालाई बेबकुफ बनाउनु त भएन नि ।
सिंगो राष्ट्र चाहियो हामी नेपालीलाई । सारा जनताले चाहेको कुरा हो यो । अनि यो देशमा बहुसंख्यक हिन्दु धर्म मान्ने छन् । यही देशमा म आफू गाईलाई पूजा गर्छु । यहीँ गाई काटेर खाएको हेर्न सक्छु त ? सक्दिनँ । यस्ता कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । हिजो पनि मस्जिद थियो, गुम्बा थियो, हामी सबै धर्म र जातका मान्छे मिलेर बसेकै थियौं त । कहाँ विभेद थियो ? किन धर्मको कुरा उठाएर द्वन्द्व निम्त्याउन खोजियो ?
राजसंस्था त, राप्रपाको महाधिवेशनले के निर्णय गर्छ, त्यसै अनुसार हुने हो । राजसंस्थाबारे म अहिले बोल्न चाहन्नँ । अनि गणतन्त्र ल्याउनेहरू पनि कहाँ सफल भए त ? यस्तै हुन्छ गणतन्त्र ? देश बीसौं वर्ष पछाडि धकेलियो । लाखौं युवा बिदेसिएका छन् । के परिवर्तन भयो ? हामीले सोचेको गणतन्त्र यस्तै थियो ? कम्तीमा पहिले जनता अनुशासित त थिए । अहिले कन्ट्रोल भएन । आफ्नै दललाई सम्हाल्न नसक्नेले जनतालाई कसरी सम्हाल्छ ?
म नेपाली हुँ, मलाई राष्ट्रियता प्यारो छ भन्न नपाउनु ? सबै धर्मकाले मलाई माया गर्नुहुन्छ भनेर म पशुपति, गुम्बा वा मस्जिद नजाऊँ त ? सबै धर्मावलम्बीप्रति मेरो अगाध सम्मान छ । तर मेरो पहिचान हिन्दु हो ।
यदि म अवसरवादी थिएँ भने माओवादीभित्रै बार्गेनिङ गरेर कुनै पोस्टमा बस्थें होला । सरकारमै छ पार्टी । त्योबाहेक अन्य ठूला दलमा जान सक्थें होला । तर चौथो ठूलोपार्टीमा गएकी छु । राप्रपामा म जनताको सेवा गर्न आएकी हुँ ।
यो सामाग्री कान्तिपुर अनलाईनबाट लिएका हौं ।
राजुले सुताए बिना र राकेशलाई निर्वस्त्र एउटै बेडमा
ब्यापारीका घरमा ‘मधेस विरोधी’ लेख्दै जनकपुरमा मोर्चाले निकाल्यो लाठी जुलुस